Himalaya Dainik » जहाँ कोरोनाभाइरस संक्रमित वृद्धवृद्धालाई मर्नका लागि छाडीयो
जहाँ कोरोनाभाइरस संक्रमित वृद्धवृद्धालाई मर्नका लागि छाडीयो
चीनको वुहान शहरबाट फैलिन शुरु भएको कोरोनाभाइरसले बिश्वलाई नै थिलीथिलो बनाएको छ। विश्वका शक्तीशाली देशहरुले पनि यस भाइरससँग हार खाइसकेका छन्।
वर्ल्डोमिटर्सको तथ्यांक अनुसार हालसम्म विश्वभरमा कोरोनाको संक्रमित हुनेको संख्या २ करोड ४६ हजार ६ सय ४२ रहेको छ भने मृत्युहुनेको संख्या ७ लाख ३४ हजार ५ सय ५५ नागिसककेको छ ।
यसैविच बेल्जियमको दुखदायी खबर चर्चामा छ। बेल्जियममा अस्पतालहरूले अहिले कोरोना पोजिटिभ बिरामीहरूलाई लिन अस्वीकार गरेको छ। जसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँ रहेका जेष्ठ नागरिकहरु यो समस्याको सामना गरिरहनु परेको छ र मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको न्युयोर्क टाइम्सले खबर छापेको छ।
शर्ली डोयेन आफ्नो भाइसँग बेल्जियमको ब्रसेल्स शहरमा क्रिस्टेलियन नर्सिङ होम चलाउँछिन्। यतिबेला उनको नर्सिङ होममा केवल कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएका बिरामीहरु मात्र भर्ना भएका छन्। पछिल्लो तीन हप्तामा यस अस्पतालमा ८ जना स्थानीय बासिन्दाहरूको मृत्यु भइसकेको छ।
उनको अस्पतालक कर्मचारीहरुमा सुरक्षाका लागी लगाउनु पर्ने त्यस्ता कुनैपनि उच्चस्तरिय उपकरण वा शुटहरु छैन । कर्मचारीहरु केवल साधारण गाउन र चस्मामा बिरामीहरुको हेरचाह गरिरहेका छन्। डोयनले कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचारको लागि ठुला अस्पतालसँग सहयोग मागेकी थिइन् तर पनि उनलाई कुनै सहयोग प्राप्त भएको छैन। वास्तवमा ठुला अस्पतालका व्यवस्थापकहरुले उनलाई त्यस्ता बिरामीहरुको लागी भगवानसँग प्रार्थना गर्नु र मर्न दिनु बाहेक अरु कुनै विकल्प नरहेको बताएको छ।
जव डोयनले संक्रमित बासिन्दाहरूलाई जम्मा गरेर अस्पतालमा भर्ना गर्नका लागी बिन्ती गरिन तर उनलाई मोर्फिन खुवाउन र मृत्यको प्रतिक्षा गर्न भनियो। १० अप्रिल बिहान अवस्थाले झन् जटिल मोड लियो, संक्रमितको मृत्यु हुन थाल्यो। पहिलो बिरामीको मृत्यु दिउँसो १ बजेर २० मिनेटमा भयो त्यसको तिन घण्टामा दोश्रो बिरामीको मृत्यु भयो र त्यसपछि फेरी अर्को बिरामीको मृत्यु भयो। यस्तो अवस्थामा पनि अस्पतालबाट कुनै एम्बुलेन्स आएन।
त्यसैगरी, डोयनले कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित ८९ वर्षिया महिला अडोलर्राता बालडुसीलाई फेला पारिन्। संक्रमित महिलाको छोरा बालू फ्रान्को पचियोलीले आफ्नो आमाको हेरचाह गर्न प्यारामेडिकहरू बोलाउनको लागि मांग गरे। एकातिर, उसले आफ्नी आमालाई अस्पताल लैजान बिन्ती गरे तर अस्पतालबाट केहि सहयोग आएन।
अन्तत: उनले आफ्नो आमालाई मोर्फिनको एउटा डोज दिए। केही समय पछि प्यारामेडिक्सले तिम्री आमाको अब मृत्यु हुन्छ भन्ने जवाफ दिए। केही घण्टा पछि उनको मृत्युभयो। बेल्जियममा, चिकित्सा अवस्था यति नाजुक भइसकेको छ की यहाँ प्यारामेडिक्स र अस्पतालहरूले जेष्ठ नागरिकहरुको हेरचाह गर्न सोझै अस्विकार गर्ने न्युयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।
यहाँका अस्पतालमा बेडहरु पनि पूर्ण छैन। बेड भएपनि पहिले नै बिरामीहरू भर्ना भएका छन्। नयाँ संक्रमितहरुलाई कुनैपनि हिसाबले भर्ना गरिदैन।
जब एक स्कुलका ७ शिक्षिका एकैपटक गर्भवती भए…
यी पुरुष सुँगुरकोपछि लागेको तस्बिर भाइरल, किन दाैडिए उनी?
पल्सरलाई पछी पार्ने नयाँ फिचरसहित आरटीआर २०० नेपालमा सार्बजनिक हुदै
सर्वाधिक कमाई गर्ने ८ बलिउड स्टारः कोसँग कती छ सम्पती ?
साप्ताहिक राशिफल : साउन २५ गते आईतबारदेखी साउन ३१ गते शनिबारसम्म